Safal Khabar - सुस्ता, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा बनाउन किन डराउदैंछ सरकार ?
सुस्ता, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा बनाउन किन डराउदैंछ सरकार ?
शनिबार, ०४ माघ २०७६, ०८ : ४२
नदीविज्ञ जगतप्रसाद भुसाल भारतले बल मिच्याइँ गरी नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सुस्तामा कालीगण्डकी (नारायणी)को पुरानो धारको विषयमा विवाद छ। ‘स्थिर सीमा सन्धिअनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपूर्व जुन सीमा कायम थियो त्यही सीमा हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ। तर, भारतले पुरानो धारलाई नमानेर बल मिच्याइँ गरिहेको छ’, उनी भन्छन्। नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८४५ मा स्थिर सीमा सन्धि भएको थियो। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेटेपछि कलाकारले त्यसको विरोधमा धमाधम देशभक्तिका गीतहरु बाहिर ल्याइरहेका...
यस्तो हो नेपालको खास नक्सा, सरकारले लुकाएर राखेको खुलासा
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई...